Baby Yoda notarihin'ireo mpanakanto maro kokoa ary noho izany dia mitohy amin'ny viral | Famoronana an-tserasera
El Baby Yoda dia namela anay saika moana noho ny zavatra farany indrindra ary squishy hitantsika efa ela. Ary ankehitriny dia mpanakanto marobe no niara-nanolotra ny fahitany manokana tamin'ny alàlan'ilay Baby Yoda izay manohy manao adala antsika ihany.
Ny Mandalorian dia andiana Disney Plus vaovao, ny serivisy streaming vaovao mankany Netflix na HBO, ary iza no nanaitra ny rehetra tamin'ny fananana an'i Baby Yoda. Na dia tsara tarehy aza ny andian-dahatsoratra amin'ny fahitalavitra, ny iray amin'ireo mpihetsiketsika azy dia nanjary ilay nanjary fironana sy nalaza be.
Jon Favreau no nanambara ny heviny momba ny Baby Yoda ary azontsika saika milaza fa ny Twitter dia nirehitra tamin'ny hadalàn'ny fahitana ilay Baby izany dia afaka mitondra ny halemem-panahy amin'ny olona mangatsiaka indrindra eto an-tany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika ny tena mombamomba ity toetra mahafatifaty ity, na dia fantatsika aza dia nantsoina hoe "ilay zazalahy" amin'ny The Mandalorian. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy mety ilay Yoda fantatsika, satria maty tao amin'ny Return of the Jedi izy, ary amin'ity andiany vaovao amin'ny Disney Plus ity dia maharitra dimy taona aorian'ny horonantsary.
- TREVOR FRALEY (@illustrevor) Novambra 19, 2019
Ankehitriny dia manana a mpanakanto marobe lasa mpankafy ary nandeha niasa tamin'ny pensilihazo teny an-tànany izy ireo haneho ny fahaizany sy ny fitiavany an'i Baby Yoda miaraka amin'izay.
Efa manao an'io mpanakanto mpankafy io aho! Fitiavana ny seho. :-) pic.twitter.com/pIQ3h1ZrH7
- NecroMomicon (@JesDKArt) Novambra 20, 2019
Misy ny karazany rehetra, ary inona no hilaza izany mitazona ny tany am-boalohany isika ary ny sary voalohany zarainay amin'ireto andalana ireto. Fa momba izay ihany, aza hadinoina ireo seza ireo fa misy terraces izay saika iray amin'ireo sambo nampiasain'ny Imperial. Ary mazava ho azy, tsy holazainay aminao hoe iza izy ireo, fa hahagaga anao foana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto maro kokoa no mivondrona mba handray ny zavaboary mahafinaritra indrindra amin'ny vahindanitra: Yoda zazakely
Grid system, boky ilaina ho an'ny famolavolana
Everybody Street, sary an-dalambe